५६ जनाको जम्बो टोली अपचलनमा संलग्न | Nagarik News - Nepal Republic Media
५६ जनाको जम्बो टोली अपचलनमा संलग्न
दाङ – नारायणपुरस्थित देवः विकास बैंकको १८ करोड रकम हिहिनामिना प्रकरणमा बैंक सञ्चालक तथा सिइओकै मुख्य हात रहेको खुलेको छ। उनीहरूसहित यो प्रकरणमा ५६ जनाको जम्बो टोली संलग्न रहेको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छ। हिनामिना प्रकरणमा संलग्न देखिएका ५६ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। बैंकको मोटो रकम हिनामिना प्रकरणमा घटना बाहिर आएको दुई महिनापछि उच्चअदालत तुलसीपुरमा संलग्न देखिएका ५६ जनाविरुद्ध बैंकिङ कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो।
सो बैंकको १७ करोड ९९ लाख ९० हजार रूपैयाँ हिनामिना भएको भन्दै उजुरी परेपछि प्रहरीले उक्त बैंकका शाखा प्रबन्धक समीर बुढाथोकीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। बैंक म्यानेजर बुढाथोकीसँगको दुई महिना लामो अनुसन्धानपछि प्रहरीले यो प्रकरणमा ५६ जना प्रत्यक्ष संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
यो प्रकरणबारे प्रहरीले यो अवधिमा ६५ जनामाथि अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानको घेरामा परेका ६५ मध्ये नौजना भने घटनामा संलग्न नदेखिएकाले उनीहरूलाई छोडिएको थियो। ‘हामीले यो घटना बाहिर आएपछि ६५ जनामाथि अनुसन्धान ग-यौं,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी निरीक्षक राजन गौतमले भने, ‘६५ मध्ये ५६ जना यो प्रकरणमा संलग्न भएको देखियो। ती ५६ जनाविरुद्ध नै मुद्दा दर्ता गरिएको छ।’
मुद्दा दर्ता गरिएकामध्ये बैंकको रकम हिनामिना प्रकरणका मुख्य व्यक्ति बैंक म्यानेजर समीरसहित १३ जनामात्रै प्रहरी नियन्त्रणमा छन्। अन्य सबै प्रहरीको फरार सूचीमा छन्।
घोराही केन्द्रीय कार्यालय रहेको वेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक देवः विकास बैंकमा मर्ज भएपछि बैंकको रकम हिनामिना भएको देखिएको थियो। वेस्टर्न बैंकमा रहेकै बेला म्यानेजर बुढाथोकीले बैंकको रकम हिनामिना गर्न थालेको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छ। वेस्टर्नको हिसाबकिताब पारदर्शी नदेखिएपछि देवः विकास बैंकले रकम हिनामिना गरिएको भन्दै म्यानेजर बुढाथोकीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो।
बुढाथोकीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको प्रहरीले यो प्रकरणमा बैंकका सिइओ तथा बैंक सञ्चालकहरू स्वयं नै दोषी देखिएको बताएको छ। प्रहरीका अनुसार यो प्रकरणमा बैंक प्रबन्धक, सिइओ, ६ जना सञ्चालक, सातजना कर्मचारी दोषी देखिएका छन्। १८ करोड रकम प्रयोग गर्नेमा उनीहरूसहित अन्य ४३ जना छन्। हिनामिना भएको रकम प्रयोगकर्ताहरू सबैविरुद्ध बैंकिङ कसुर ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ।
प्रहरीका अनुसार बैंकका सञ्चालक तथा सिइओले नक्कली ऋणी खडा गरेर प्रबन्धक समीरलाई बैंकको करोडौं रकम निकासा गर्न उकासेको देखिएको छ। यसरी आएको रकम पुनः उनीहरूसम्मै पुगेको पनि प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। बैंक सञ्चालक र कर्मचारीबाहेक मुद्दा चलाइएका अन्य ४३ जना भने खातावाला सर्वसाधारण हुन्, उनीहरूले त्यो १८ करोड रकम आफ्नो खातामार्फत प्रयोग गरेको देखिएको छ।
हिनामिना भएको रकमको स्रोत पत्ता लगाइसकिएको प्रहरीले जनाएको छ। उक्त रकम कुनकुन व्यक्तिको हातमा परेको हो ? भन्ने बारेमा सबै खुलिसकेको प्रहरी निरीक्षक गौतमले जानकारी दिए। ‘हिनामिना भएको रकम कहाँ ककसको हातमा पुगेको छ भन्ने कुरा सबै खुलिसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर उनीहरूले त्यो रकम कहाँ कुन प्रयोजनमा खर्च गरेका छन् ? भन्ने बारेमा त आरोपित सबै पक्राउ परेपछि मात्रै खुल्नेछ।’
प्रकाशित: ५ कार्तिक २०७६ ०९:०० मंगलबार